Weerar Ka Dhacay Magaalada Mukalla Ee Dalka Yemen. – Calamada.com
Weerar Ka Dhacay Magaalada Mukalla Ee Dalka Yemen.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar Madaafiic ah lagu qaaday xarun ciidan oo ku taala magaalada Mukallah ee gobalka Xadra Mowt.
Madaafiicda ayaa si gaar ah loola beegsaday xarun ciidamada gaarka dowlada Imaaraatka Carab ay ka sameysteen magaalada Mukallah’iyadoona duqeyntaasi ay geysatay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay ciidamada daba dhilifka Imaaraatka Carabta.
Saldhiga la duqeeyay ayaa ku yaala dhanka Galbeed ee magaalada Mukallah’iyadoona dowlada Imaaraatka ay ka mid tahay dowladaha isbaheysiga ee duulaanka ku qaaday dalka Yemen kuwaasi oo xasuuq joogta u geysta dadka shacabka Muslimka ah ee ku dhaqan dalkaasi.
Dhanka kale dagaal culus oo ka dhacay agagaarka deegaanka Qeyfah ee gobalka Radaac waxaa lagu dilay Shan askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Xuuthiyiinta.
Sidoo kale inka badan Todobo askari ooÂ maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax miino oo lagula beegsaday deegaanka Al-rowdah oo ka tirsan gobalka Al-beydhaa.
Duqeynta ka dhacday magaalada Mukallah iyo weerarada lagu dilay maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ee ka kala dhacay gobalada Radaac iyo iyo Al-beydhaa waxaa mas’uuliyadooda sheegtay Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab.
Previous: Xildhibaan ilkacase Oo Muqdisho Lagu Weeraray.
Next: Faahfaahin Laga Helayo Dil Ka Dhacay Degmada Garoowe.